သရုပ်ဆောင် ကျော်ထက်အောင် နှင့် အင်တာဗျူး - Chin World
Home Interview သရုပ်ဆောင် ကျော်ထက်အောင် နှင့် အင်တာဗျူး
သရုပ်ဆောင် ကျော်ထက်အောင် နှင့် အင်တာဗျူး
ကိုးရီးယား – မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ချင်းပြည်နယ်မှာ ကိုးရီးယားသရုပ်ဆောင် နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်လာရိုက်မယ့် သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်ထက်အောင် ကို ချင်းဝေါလ်သတင်းဌာနက အင်တာဗျူးထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို အကယ်ဒမီ ဒါရိုက်တာ ဇင်ယော်မောင်မောင်ကရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်၊ မေသန်းနုတို့လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀ အကုန်ကျခံမှာဖြစ်ပြီး ဖလမ်း၊ ဟားခါး၊ ထန်တလန်၊ တီးတိန်တို့မှာရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဘူဆန်မြို့မှာလည်း ဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာကိုကျော်ထက်အောင်ကဘယ်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်မှာလဲ။ ဆလိုင်းထန်နေရာကနေဇာတ်လမ်းမှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ပထမဆုံး ဒီလို ကိုးရီးယား မြန်​မာချစ်​ကြည်​ရေးအတွက်​ရိုက်​ကူးတဲ့ ဇာတ်​လမ်းမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားတစ်​ယောက်​နေရာကနေပါဝင်​ခွင့်​ရတဲ့အတွက်​ ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ ပါဝင်​ခွင့်​ပေးတဲ့ အမမမီး နဲ့ ဦးမောင်​တို့ကို ကျေးဇူးတင်​ဂါရဝပြုကြောင်းပြောချင်​ပါတယ်​။ ဒီဇာတ်​လမ်းမှာ ကျွန်​တော်​က ချင်းတိုင်းရင်းသားတစ်​ဦး မိဘမဲ့ကျောင်းမှာကြီးပြင်းသူတစ်​အနေနဲ့ပါ ဇာတ်​လမ်းရဲ့အသေးစိတ်​ကိုပြောပြရင်​ အရသာပေါ့သွားမှာစိုးတဲ့အတွက်​ ပိတ်​ကားပေါ်မှာပြသတဲ့ အချိန်​မှာ လာရောက်​ကြည့်​ရှုပေးဖို့ ပြောပါရစေခင်​ဗျာ။
၂။ချင်းပြည်နယ်ကိုရောက်ဖူးလား။ ချင်းလူမျိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိဖူးတာတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ချင်းပြည်​နယ်​ကို တခါမှမရောက်​ဖူးသေးပါဘူးခင်​ဗျ။ ငယ်​ငယ်​တုန်းက ခုလိုအင်​တာနက်​တွေမပေါ်သေးတဲ့အချိန်​မှာတော့ လူကြီးတွေဆီက တိမ်​တွေပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ။ တောင်​ဇလပ်​ပန်းနီနီလေးတွေပွင့်​ကြောင်းနဲ့ နောက်​အသဲပုံရေကန်​ကြီးရှိတယ်​ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ အမှတ်​အရဆုံးပါပဲ ။ နောက်​ပြီး ချင်းလူမျိုးအမျိုးသားတွေ အမဲလိုက်​တဲ့အကြောင်း ကိုယ့်​အကြီးအကဲ အကိုအကြီးတွေကိုဆို လေးစားကြကြောင်း နွားနောက်​တွေမွေးမြူကြတဲ့အကြောင်း အမျိုးသမီးတွေပါးရဲထိုးကြကြောင်း တွေကိုတော့ ကျွန်​တော့်​မှတ်​သားဖူးပါတယ်​ဗျ။
၃။ ချင်းပြည်နယ်မှာအခုလိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးရတာ အစ်ကိုဘယ်လိုခံစားရလဲ?
ဖြေ။ ပထမဆုံးအကြိမ်​ရောက်​ဖူးမယ့်​ နေရာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ စိတ်​လှုပ်​ရှားပါတယ်​ ကိုယ့်​နိုင်​ငံထဲက သဘာဝအလှတွေကို အခြားသူတွေကိုပါ ပြသခွင့်​ရမှာကိုလည်း ဂုဏ်​ယူပါတယ်​။
၄။ ချင်းပြည်နယ်မှာအခုလို ဇာတ်ကားလာရိုက်ခြင်းအားဖြင့် ချင်းလူမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ် အကြောင်းဘယ်လိုဖော်ကျူးခွင့်ရှိနိုင်မလဲ?
ဖြေ။ ကိုယ့်​ပြည်​တွင်းက နေရာဒေသတွေကို လူအတော်​များများကတော့ ရောက်​ဖူးချင်​ လည်​ပါတ်​ချင်​ ကြပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မရောက်​နိုင်​တဲ့သူတွေအတွက်​ ဒီရုပ်​ရှင်​ကနေတဆင့်​ ချင်းပြည်​နယ်​ရဲ့ အလှအပနဲ့ လူနေမှု တစိတ်​တဒေသကို ရုပ်​ရှင်​အားဖြင့်​ ပြသခွင့်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါတယ်​။
၅။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ချင်းပြည်မှာရိုက်ဖို့စီစဉ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကကော?
ဖြေ။ ဒါကတော့ ဒီဇာတ်​လမ်းကို ပုံဖော်​ကြမယ့်​ ဒါရိုက်​တာ ပရိုဂျူဆာ အပါအဝင်​ တာဝန်​ရှိသူများကဆုံးဖြတ်​ကြတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
၆။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာအတူသရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုးရီးယားသရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးပေးပါ ?
ဖြေ။ ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း အနုပညာဝမ်းစာပြည့်​အောင်​ကြိုးစားနေတဲ့သူမို့ အခြားသူကို မှတ်​ချက်​ပေးတယ်​ဆိုတာထက်​ အခုလိုပါဝင်​တာကို ဝမ်းမြောက်​စွာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်​လို့ပြောချင်​ပါတယ်​။ သရုပ်​ဆောင်​၂ဦးစလုံးဟာလည်း ဖော်​ရွေစွာနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်​ကိုင်​ကြတဲ့သူတွေပါ အခြားနိုင်​ငံက အနုပညာရှင်​တွေရဲ့ သရုပ်​ဆောင်​မှုတွေနဲ့ သူတို့ Team ရဲ့ လုပ်​ကိုင်​ပုံတွေကို လေ့လာခွင့်​ရမယ်​လို့ မျှော်​လင့်​ပါတယ်​။
၇။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကို နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပေးပါ?
ဖြေ။ ကျွန်​တော်​တို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအကိုများအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ အေးချမ်းပျော်​ရွှင်​ကြပါစေခင်​ဗျာ။
သရုပျဆောငျ ကျော်ထကျအောငျ နှငျ့ အင်တာဗျူး
ကိုးရီးယား – မြန်မာ ချဈကွညျရေးအတွကျ “တိမျတွေပျေါကပနျး” ရုပျရှင်ဇာတ်ကားကို ချငျးပြည်နယ်မှာ ကိုးရီးယားသရုပျဆောငျ နဲ့အတူ ရုပျရှင်လာရိုက်မယျ့ သရုပျဆောငျ ကိုကျော်ထကျအောငျ ကို ချငျးဝေါလျသတငျးဌာနက အင်တာဗျူးထားပါတယျ။ ဒီရုပျရှင်ဇာတ်ကားကို အကယ်ဒမီ ဒါရိုက်တာ ဇငျယျောမောငျမောင်ကရိုက်ကူးမှာဖြဈပွီး နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတွဖြေစ်တဲ့ ဝတ်မှုံရှရေညျ၊ မသေနျးနုတို့လညျး ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယျ။ ဒီဇာတ်ကားအတွကျ ကျပျသိနျးပေါငျး ၅၀၀၀ အကုန်ကျခံမှာဖြဈပွီး ဖလမျး၊ ဟားခါး၊ ထန်တလနျ၊ တီးတိန်တို့မှာရိုက်ကူးသွားမှာဖြဈပွီး ကိုးရီးယားနိုငျငံ ဘူဆနျမွို့မှာလညျး ဆက်လကျရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယျ။
၁။ ဒီဇာတ်လမျးမှာကိုကျော်ထကျအောင်ကဘယျနရောကနေ သရုပျဆောင်မှာလဲ။ ဆလိုငျးထနျနရောကနေဇာတ်လမျးမှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ပထမဆုံး ဒီလို ကိုးရီးယား မြနျ​မာချဈ​ကွညျ​ရေးအတွကျ​ရိုကျ​ကူးတဲ့ ဇာတျ​လမျးမှာ ချငျးတိုငျးရငျးသားတဈ​ယောကျ​နရောကနေပါဝငျ​ခွငျ့​ရတဲ့အတွကျ​ ဝမျးသာကွောငျးနဲ့ ပါဝငျ​ခွငျ့​ပေးတဲ့ အမမမီး နဲ့ ဦးမောငျ​တို့ကို ကျေးဇူးတငျ​ဂါရဝပြုကွောငျးပြောချငျ​ပါတယျ​။ ဒီဇာတျ​လမျးမှာ ကွနျြ​တျော​က ချငျးတိုငျးရငျးသားတဈ​ဦး မိဘမဲ့ကျောငျးမှာကွီးပြငျးသူတဈ​အနေနဲ့ပါ ဇာတျ​လမျးရဲ့အသေးစိတျ​ကိုပြောပြရငျ​ အရသာပေါ့သွားမှာစိုးတဲ့အတွကျ​ ပိတျ​ကားပျေါမှာပြသတဲ့ အချိနျ​မှာ လာရောကျ​ကွညျ့​ရှုပေးဖို့ ပြောပါရစေခငျ​ဗျာ။
၂။ချငျးပြည်နယ်ကိုရောက်ဖူးလား။ ချငျးလူမျိုးအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးသိရှိဖူးတာတွကေိုလညျး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ချငျးပြညျ​နယျ​ကို တခါမှမရောကျ​ဖူးသေးပါဘူးခငျ​ဗျ။ ငယျ​ငယျ​တုနျးက ခုလိုအငျ​တာနကျ​တွမေပျေါသေးတဲ့အချိနျ​မှာတော့ လူကွီးတွဆေီက တိမျ​တွေပျေါမှာရှိတဲ့နရောဆိုပွီး ပြောခဲ့တာ။ တောငျ​ဇလပျ​ပနျးနီနီလေးတွပွေငျ့​ကွောငျးနဲ့ နောကျ​အသဲပုံရကေနျ​ကွီးရှိတယျ​ဆိုတဲ့အကွောငျးတွကေိုတော့ အမှတျ​အရဆုံးပါပဲ ။ နောကျ​ပွီး ချငျးလူမျိုးအမျိုးသားတွေ အမဲလိုကျ​တဲ့အကွောငျး ကိုယျ့​အကွီးအကဲ အကိုအကွီးတွကေိုဆို လေးစာွးကကွောငျး နွားနောကျ​တွေမွေးမြူကွတဲ့အကွောငျး အမျိုးသမီးတွပေါးရဲထိုွးကကွောငျး တွကေိုတော့ ကွနျြ​တျော့​မှတျ​သားဖူးပါတယျ​ဗျ။
၃။ ချငျးပြည်နယ်မှာအခုလိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးရတာ အစ်ကိုဘယ်လိုခံစားရလဲ?
ဖြေ။ ပထမဆုံးအကွိမျ​ရောကျ​ဖူးမယျ့​ နရောဖြဈ​တဲ့အတွကျ​ စိတျ​လှုပျ​ရှားပါတယျ​ ကိုယျ့​နိုငျ​ငံထဲက သဘာဝအလှတွေကို အခြားသူတွကေိုပါ ပြသခွငျ့​ရမှာကိုလညျး ဂုဏျ​ယူပါတယျ​။
၄။ ချငျးပြည်နယ်မှာအခုလို ဇာတ်ကားလာရိုကျခြငျးအားဖြငျ့ ချငျးလူမျိုးနဲ့ချငျးပြည်နယျ အကွောငျးဘယ်လိုဖ်ကျောူးခွငျ့ရှိနိုင်မလဲ?
ဖြေ။ ကိုယျ့​ပြညျ​တွငျးက နရောဒသေတွေကို လူအတျော​များများကတော့ ရောကျ​ဖူးချငျ​ လညျ​ပါတျ​ချငျ​ ကွပွီး အကွောငျးအမျိုးမျိုးနဲ့ မရောကျ​နိုငျ​တဲ့သူတွအေတွကျ​ ဒီရုပျ​ရှငျ​ကနေတဆငျ့​ ချငျးပြညျ​နယျ​ရဲ့ အလှအပနဲ့ လူနမှေု တစိတျ​တဒေသကို ရုပျ​ရှငျ​အားဖြငျ့​ ပြသခွငျ့​ရရှိမှာဖြဈ​ပါတယျ​။
၅။ ဒီဇာတ်လမျးကို ချငျးပြည်မှာရိုက်ဖို့စီစ ဉျဖြဈရတဲ့အကွောငျးကကော?
ဖြေ။ ဒါကတော့ ဒီဇာတျ​လမျးကို ပုံဖျော​ကွမယျ့​ ဒါရိုကျ​တာ ပရိုဂျူဆာ အပါအဝငျ​ တာဝနျ​ရှိသူများကဆုံးဖြတျ​ကွတာပြဲဖဈ​ပါတယျ​။
၆။ ဒီဇာတ်လမျးမှာအတူသရုပျဆောင်မယျ့ ကိုးရီးယားသရုပျဆောင်နဲ့ပတျသကျပွီးမှတ်ချကျပေးပေးပါ ?
ဖြေ။ ကိုယျ​တိုငျ​ကလညျး အနုပညာဝမျးစာပြညျ့​အောငျ​ကွိုးစားနတေဲ့သူမို့ အခြားသူကို မှတျ​ချကျ​ပေးတယျ​ဆိုတာထကျ​ အခုလိုပါဝငျ​တာကို ဝမျးမြောကျ​စွာနဲ့ ကွိုဆိုပါတယျ​လို့ပြောချငျ​ပါတယျ​။ သရုပျ​ဆောငျ​၂ဦးစလုံးဟာလညျး ဖျော​ရွစွောနဲ့ ပူးပေါငျးပွီးလုပျ​ကိုငျ​ကွတဲ့သူတွပေါ အခြားနိုငျ​ငံက အနုပညာရှငျ​တွရေဲ့ သရုပျ​ဆောငျ​မှုတွနေဲ့ သူတို့ Team ရဲ့ လုပျ​ကိုငျ​ပုံတွကေို လလေ့ာခွငျ့​ရမယျ​လို့ မျှျော​လငျ့​ပါတယျ​။
၇။ ချငျးတိုငျးရငျးသားတွကေို နှုတ်ခွနျးဆက်စကားပြောကွားပေးပါ?
ဖြေ။ ကွနျြ​တျော​တို့ရဲ့ တိုငျးရငျးသားညီအကိုများအားလုံး ကျနျးမာချမျးသာကွပါစေ အေးချမျးပျော​ရှငျ​ကွပါစခေငျ​ဗျာ။
Previous post မြန်မာနိုင်ငံ ဂုဏ်သိက္ခာ ထပ်မံမ ထိခိုက်ရန် အင်တာနက်ဒေတာ ပိတ်မှု အမြန်ဆုံးပြန်ရရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်
Next post ဟားခါးမြို့ပေါ် ရေပေးဝေရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခု လျော်ကြေးငွေ ၂၂၀ သန်းပေးရမည်
ZCD Party အနဖွေငျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ၁၂ နရောယှဉျပွိုငျမညျ
မတူပီမွို့နယျ ဆဘောငျးပီကြေးရှာတှငျ ၉တနျး၊၁ဝတနျး သငျပေးမညျ့ ဆရာကို ရပျရှာမိဘမြားမှ ပိုကျဆံစုပွီး ချေါယူ
ခငျြးပွညျနယျရှိ မွို့နယျတိုငျးတှငျ ညမထှကျရ အမိနျ့နှငျ့ ပကျသကျပွီး ယနညေ့မှစပွီးအခြိနျပွောငျးလဲပေး
ယခုနှဈမိုးနညျးမှုကွောငျ့ မြောကျငိုသီးမြားတဈလနောကျကမြှ သီးသဖွငျ့ ဈေးကောငျးမရဟုဆို
AA အဖှဲ့ ခငျြးလူမြိုးမြားပိုငျနကျတှငျ စဈရေးလုပျရှားနထေိုငျခွငျး မလုပျရနျ CNF ထုတျပွနျ
ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်နယ်အစိုးရစီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းကြီးများကို ယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် အပြီးဆောင်ရွက်မည်ဟုဆို
AAအဖှဲ့မှ ခငျြးပွညျနယျ၏ ဒသေဖှံ့ဖွိုးမှုကို မလိုလားသညျ့ စိတျဓာတျပျေါလှနျဟု စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျမှပွော